Tsvangirai vows to remain opposition leader
MDC leader Morgan Tsvangirai has dismissed his third consecutive defeat by Mugabe as fraud.
Zimbabwe Prime Minister and MDC leader Morgan Tsvangirai. Picture: AFP/JEKESAI NJIKIZANA
HARARE - Zimbabwe's opposition leader Morgan Tsvangirai said on Wednesday he would remain leader of his Movement for Democratic Change (MDC) party despite an internal call for him to quit after an overwhelming defeat in July's presidential election against Robert Mugabe.
Tsvangirai has dismissed his third consecutive defeat by Mugabe as fraud, but it has fuelled speculation he might step down as leader of the MDC, the party he has led since its formation in 1999 when Zimbabwe's economy began to crumble.
However,Tsvangirai, who served as prime minister in a unity government with Mugabe's ZANU-PF party until last month, said no one had challenged him for the leadership and he would continue as MDC president until the next party congress in 2016.
"You don't just wake up in the streets and say Tsvangirai must go. There are forums that should make this decision," Tsvangirai, said at a news briefing.